नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : माओवादीको पछाडि कुद्ने मतियारहरु हो, जिउँदै मुर्दा बनेका कथित मान्छेहरु हो ! यदी तिमीहरु साँचै मान्छे हौ भने यो समाचार पढेर जबाफ देउ !!!
माओवादीको पछाडि कुद्ने मतियारहरु हो, जिउँदै मुर्दा बनेका कथित मान्छेहरु हो ! यदी तिमीहरु साँचै मान्छे हौ भने यो समाचार पढेर जबाफ देउ !!!
स्पस्ट बुझिने गरी पढ्न तल फोटोमा क्लिक गर्नुस्